99 စီးတီး• Yuri BSF အတွက်အနံ့မရှိဘဲလောက်စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း
Yuri | ဖေဖေါ်ဝါရီလ 16, 2019 | အနံ့မရှိဘဲလောက်စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း
လေ့ကျင့်ရေးကeလေ့ကျင့်ရေး ++ BSF ခေတ်သစ်ငါးမွေးမြူရေးအနံ့မရှိဘဲ
အနံ့မရှိဘဲခေတ်သစ် BSF စိုက်ပျိုးမှုတစ်ခုတည်းသောလေ့ကျင့်ရေးကeလေ့ကျင့်ရေး ++ ဖြစ်ပါတယ်။ အရာကိုသင်အောင်မြင်ဖို့သေချာ။ အားလုံးလေ့ကျင့်ရေးလဲ tutorial ကeလေ့ကျင့်ရေး ++ လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုး သငျသညျ PlayStore အတွက်လျှောက်လွှာ Yuri BSF မှတဆင့်ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။ သင်နှင့်အနီးဆုံးဖြစ်သည့်အလေ့အကျင့်၏တည်နေရာရွေးချယ်နိုင်ပါသည်အတူတကွ Yuri စိုက်ပျိုးလေ့ကျင့်ရေး BSF bsf ။ လေ့ကျင့်ရေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မွေးမြူရေးလောက် ++ ကိုလည်းသင် Yuri BSF 99 အင်ဒိုနီးရှားလျှောက်လုံးပိုပြီးမြို့ကြီးများအရပ်ရပ်သို့ကွဲပြားခြံများတွင်ကျင့်သုံးခွင့်ရှိသည်။ အနံ့မရှိဘဲမွေးမြူရေးလေ့ကျင့်ရေး BSF နှင့်အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
လျှောက်လွှာ Yuri BSF Download
ထိုအခါသင်သည် PlayStore အတွက်လျှောက်လွှာ Yuri BSF မှဝင်ရောက်ခွင့်ပေးတော်မူလတံ့
သင်တို့သည်လည်းအနံ့မရှိဘဲလျှို့ဝှက်အဖွဲ့ကို FB ခေတ်သစ် bsf စိုက်ပျိုးမှုသို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့လိမ့်မည်
သင့်အနေဖြင့်လယ်ယာလယ်ကွင်း Yuri BSF ၏တဦးတည်းအတွက်လေ့ကျင့်ခွင့်ရှိသည်
သငျသညျ join မီ, သငျသညျ BRI ဘဏ်ငွေလွှဲမှတဆင့်လေ့ကျင့်ရေးကုန်ကျစရိတ်၏ငွေပေးချေမှုအထောက်အထားတင်ပြခြင်းဖြင့်မှတ်ပုံတင်ပြီးရမည်ဖြစ်သည်။
တဖန်သင်တို့အုပ်ချုပ်ရေးမှတ်တမ်းများအဖြစ် ID ကိုကတ်မိတ္တူကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။
Yuri BSF လျှောက်လွှာ Access ကို
mengiriman လွှဲပြောင်းလက်ခံရရှိပြီးနောက်, သငျသညျ Yuri BSF PlayStore ၌တည်ရှိ၏လျှောက်လွှာဖွင့်လှစ်ဖို့အထူး password ကိုလက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
PlayStore Yuri လျှောက်လွှာအတွက် BSF ခုနှစ်တွင်ပြီးသားပြင်ဆင်ထားသည်:
စက်ရုံအရွက်နှင့်အသီးအမျိုးမျိုးမှအော်ဂဲနစ်အရည်ဓာတ်မြေသြဇာ (POC) လောက်၏လျှောက်လွှာ
သော့ချက် password ကိုရတဲ့ပြီးနောက်, သငျသညျပွင့်လင်းနေဖို့, လက်တွေ့ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်ကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာအင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ရှိကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ဗီဒီယိုများဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီးကြည့်ပါ။
Yuri BSF လျှောက်လွှာထဲတွင်ဗီဒီယိုများနှင့်စာရွက်စာတမ်းများအများကြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်ကြီးမားပေမယ့်အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့်တကွ, အဆုံးရလဒ် 16MB အလွန်အလင်းလျှောက်လွှာဖြစ်လာသည်။
BSF Yuri လျှောက်လွှာသော်လည်းအမျိုးအစားမြင်းကောင်ရေဟောင်းကျောင်းမှာနေဖြင့် download လုပ်နိုင်ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ပြင်ဆင်ကြပြီဒါတွေကအဆင့်မြင့်အဆောက်အဦ။
သင်၏နောက်ခြေလှမ်း khusu အနံ့မရှိဘဲလျှို့ဝှက်အုပ်စုတစ်စု fb ခေတ်သစ် BSF စိုက်ပျိုးမှုသို့ ဝင်. ရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်။
အမည်ရသုံးအဆင့်သို့ခွဲခြားအနံ့မရှိဘဲလျှို့ဝှက်အုပ်စုတစ်စု fb ခေတ်သစ် bsf ဘိန်းစိုက်ပျိုးမှု
ဒီအုပ်စုထဲမှာသင်ကအင်ဒိုနီးရှားတလျှောက်လုံးအားလုံးရှိပြီးသား BSF Yuri အပေါင်းအဘော်တို့နှင့်တွေ့ကြုံကြလိမ့်မည်။ Meraka အတွေ့အကြုံများကိုဝေမျှနှင့်အသီးသီးမွို့၌လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းကိုဖန်ဆင်း၏။
ယဉ်ကျေးမူအကငျြ့နှင့်အတူဆွေးနွေးရန်ပေးပါ။ ကြှနျုပျတို့သညျ "နိုငျကငျြ့" "စားပြီး" ဦးဇော်လင်းကနှိမ်နင်းမည်အောင်မြင်သောစိုက်ပျိုးမှုဆီသို့ဦးတည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုနဲ့ဘာမှရှိသည်သောအရပ်ဌာနနှင့်အမှုအရာတို့ကိုမ လောက် BSF အနံ့မရှိဘဲ။
အဆိုပါဌာနခွဲမှအဆင့်အထိနေ့စဉ်အလေ့အကျင့်လောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးအားလုံးကိုအပေါင်းအဘော် BSF Yuri ကိုပိုပြီးအာရုံစိုက်ကြောင်းရည်ရွယ်သည်။
ဝယ်ယူတစ်ခုချင်းစီကိုအထုပ်သင်တို့သည်လည်းမျိုးစေ့များ, ကြက်ဥအပါအဝင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်နေအိမ်၏အလေ့အကျင့်များအတွက်ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်ပေးထားကြသည်, ဖလောင်းကောင် နှင့်အခြားအထောက်အပံ့ကိုပေးပြီးပစ္စည်းကိရိယာများ။
သက်မဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့လူနေမှုအမှုအရာ: ဒီအထုပ်နှစ်ခုအမျိုးအစားခွဲခြားထားပါသည်။ categories သက်မဲ့အရာဝတ္ထုကျနော်တို့အထောက်အထားလွှဲပြောင်းလက်ခံရယူပြီးနောက်224 နာရီ x ကိုစလှေတျပါလိမ့်မည်,
ထိုကဲ့သို့သောလောင်းစတာတွေမျိုးစေ့များ, ဥ, အဖြစ်သက်ရှိများ၏အမျိုးအစားသင့်ရဲ့စေတနာအရသိရသည်ကယ်နှုတ်တော်မူ၏လိမ့်မည်။ ဒါဟာပြင်ဆင်မှုညျ့စုံ၏နောက်သို့စေလွှတ်ခံရအသက်ရှင်သောသတ္တဝါအရာခံသောရည်ရွယ်သည်။
ပြီးတာနဲ့ application တစ်ခုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်နှင့်အုပ်စု join လည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်လေ့လာသင်ယူ, သင် Yuri BSF အင်ဒိုနီးရှားလျှောက်လုံး 99 မြို့ကြီးများကိုကျော်ပြန့်နှံ့သည့်လယ်ယာမြေများ၏တဦးတည်းအတွက်လေ့ကျင့်သင်ယူဖို့အခွင့်ရှိသည်။
သငျသညျအဘယ်သူသည်ပြီးသား berpengalan နှင့်အနံ့မရှိဘဲငါးသားဖောက်ခေတ်သစ် bsf သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်းတစ်ဦးဆရာအားဖြင့်ဗုံးဖောက်ခွဲမှုအတွက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်သင်ကတူညီတဲ့အရာတို့ကိုသင်ယူရမှာဖြစ်တယ်။
ဤသည်ဆက်ဆက်သင်တစ်ဦးအနီးအနားမြို့ကလေ့ကျင့်ရန်အဘို့အအားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှကြီးတွေ, airfare, တည်းခိုခန်းနေရာထိုင်ခင်းကုန်ကျစရိတ်များနှင့်အချိန်ကိုလည်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်ပါတယ်ဖြုန်းဖို့မလိုအပ်ပါဘူးနီးစပ်ခဲ့လို့ပဲ။
အာမခံ Up ကိုအောင်မြင်စွာ
လောက်သင်ဟာ Rp7.000 / ကီလိုဂရမ်များအတွက် BSF Yuri ကဝယ်ယူပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်နောက်တဖန်စျေးကွက်ရှာဖွေနေနှောငျ့ယှကျရန်မလို။
သင်တို့မူကားပြဿနာတစ်ခုကိုလည်း Yuri မှမရောင်းချင်ကြပါဘူးလျှင်။ သင်ဘယ်မှာလိုချင်ယောက်ျားဆုံးဖြတ်အခမဲ့များမှာ လောက်ရောင်းချနေအဆိုပါ -maggot ။
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းအနံ့လောက်လောက်မရှိဘဲစိုက်ပျိုးအလုပ်တာဝင်ငွေလိမ့်မယ်။ သငျသညျ Yuri BSF မှလုံ့လဝီရိယရောင်းလောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်။
ထုတ်လုပ်မှုလောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ - ကျနော်တို့ Rp100.000.000 မိတျဆှေပမာဏထောက်ပံ့ငွေပေးခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါစုစုပေါင်းအီးသင်ယူမှုသင်တန်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်း (အလေ့အကျင့်ကိုလယ်) လုပ်နိုင်အခါတိုင်းနှင့်နေရာတိုင်းမှာသင်အလိုတော်မှာပါပဲ။ တောင်မှသင်တန်းပစ္စည်းဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
အနံ့မရှိဘဲလောက်လယ်ယာစိုက်ပျိုးနည်းစနစ်များအပေါင်းအဘော် Yuri ရလဒ် BSF ထောင်ပေါင်းများစွာ၏အားဖြင့်အောင်မြင်စွာစမ်းသပ်ပြီးနှင့်ပျော်မွေ့ခဲ့ပြီး
လိုအပ်အဖြစ်စိုက်ပျိုး၏ကိစ္စအစဉ်အမြဲ update လုပ်ရမည်
ဗီဒီယိုကိုထောက်ခံစာနှင့်သင် youtube ကရုပ်သံလိုင်း Yuri BSF အပေါ်တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်ကိုမှန်ကန်သက်သေခံချက်ပုံစံအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုကျင့်ညွှန်ကြားပေးခြင်းမှသင်တန်းသားများကို၏ဆုချီးမြှင့်။
လေ့ကျင့်ရေးကeလေ့ကျင့်ရေး ++ paid သို့မဟုတ်အခမဲ့မဟုတ်ပါ, သင်တို့အဘို့အပေးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းအထုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ရွေးချယ်အထုပ်ပေါ် မူတည်. အဆိုပါအထုပ်စျေးနှုန်းအကွာအဝေး Rp100.000-Rp4.000.000 ။
ဒါဟာသင့်လျော်သည်။ သုညကနေတဖြည်းဖြည်းလုပ်ပစ္စည်းလမ်းညွှန်စာအုပ်တွေနဲ့ဗီဒီယိုလဲ tutorial အောင်မြင်ဖို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ လိုအပ်သကဲ့သို့သငျရုံသင်တန်းအထုပ် ++ ကeလေ့ကျင့်ရေးကိုရွေးပါ။
အမှတ် သငျသညျယ်ယူသောပစ္စည်းများ၏ညီအာရုံစိုက်အတွက်ဝယ်ဖြစ်ကြောင်း package ကုန်ပစ္စည်းများ။
အကယ်စင်စစ်သင်သည်စာရွက်စာတမ်း download, module ကိုဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်။
အခြားအ ++ 2000 တို့နှင့်လည်းယခု Join!
Tel / WA 0812-2105-2808 ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ